80mm मिनी आकार 13.3kPa दबाव 24CFM WS9290B 24V brushless डीसी प्लास्टिक आवास हल्का वजन केन्द्रापसारक ब्लोअर
वैक्यूम मिसिन/ईन्धन सेल/चिकित्सा उपकरण र inflatables को लागी उपयुक्त।
तौल: 490 ग्राम
एकाई आकार: D90*L114
स्थिर दबाव: १३ केपीए
WS9290B-24-220-X300 ब्लोअर अधिकतम 38m3/घन्टा एयरफ्लो0kpa दबाव र अधिकतम 13kpa स्थिर दबाव मा पुग्न सक्छ। यो अधिकतम आउटपुट एयर पावर हुन्छ जब यो ब्लोअर 7kPa प्रतिरोधमा चल्छ यदि हामी 100% PWM सेट गर्छौं, यो अधिकतम दक्षता हुन्छ जब यो ब्लोअर 7kPa प्रतिरोध मा चलाउँछौं यदि हामी १००% PWM सेट गर्छौं।अन्य लोड पोइन्ट प्रदर्शन PQ वक्र तल उल्लेख गर्नुहोस्:
(1) WS9290B-24-220-X300blower brushless मोटर्स र NMB बल बियरिंग्स भित्र जो धेरै लामो जीवन समय को संकेत संग छ; यो ब्लोअर को MTTF २० डिग्री सेल्सियस वातावरणीय तापमान मा २०,००० घण्टा भन्दा बढी पुग्न सक्छ
प्रश्न: यो ब्लोअर फ्यान चलाउन हामी कस्तो प्रकारको बिजुली आपूर्ति प्रयोग गर्ने?
A: सामान्यतया, हाम्रो ग्राहक 24vdc स्विचिंग बिजुली आपूर्ति वा ली मा ब्याट्री को उपयोग।
प्रश्न: के तपाइँ यो ब्लोअर प्रशंसक को लागी कन्ट्रोलर बोर्ड पनि बेच्नुहुन्छ?
A: हो, हामी यो ब्लोअर प्रशंसक को लागी अनुकूलित नियन्त्रक बोर्ड आपूर्ति गर्न सक्छौं।
Q: यदि हामी तपाइँको कन्ट्रोलर बोर्ड को उपयोग गर्दछौं भने कसरी इम्पेलर गति परिवर्तन गर्ने?
एक: तपाइँ गति परिवर्तन गर्न0~ 5v वा PWM प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मानक नियन्त्रक बोर्ड पनि एक potentiometer संग गति सजीलै परिवर्तन गर्न को लागी छ।
ब्रश डीसी मोटर्स घाउ रोटर्स र या त घाउ वा स्थायी चुम्बक stators संग निर्माण गरीन्छ।
सामान्यतया, एक डीसी मोटर को रोटेशनल गति यसको कुंडली मा EMF को आनुपातिक हुन्छ (= वोल्टेज माइनस भोल्टेज यसको प्रतिरोध मा हरायो), र टोक़ वर्तमान को लागी आनुपातिक छ। गति नियन्त्रण चर ब्याट्री tappings, चर आपूर्ति भोल्टेज, प्रतिरोधक वा इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। एक सिमुलेशन उदाहरण यहाँ पाउन सकिन्छ र एक घाउ क्षेत्र डीसी मोटर को दिशा या त क्षेत्र वा आर्मेचर जडानहरु उल्टाएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर दुवै छैन। यो सामान्यतया contactors (दिशा contactors) को एक विशेष सेट संग गरिन्छ। प्रभावकारी भोल्टेज एक श्रृंखला प्रतिरोधी सम्मिलित गरेर वा एक electronically thyristors, ट्रांजिस्टर, वा, पहिले, पारा चाप rectifiers बाट बनेको स्विचिंग उपकरण द्वारा फरक हुन सक्छ।
अघिल्लो: सानो एयर केन्द्रापसारक पक्ष च्यानल ब्लोअर
अर्को: brushless मोटर संग उच्च गति केन्द्रापसारक ब्लोअर प्रशंसक
सानो एयर केन्द्रापसारक पक्ष च्यानल ब्लोअर